“Hiditra Ao Amin’ny ASEAN i Timor-Leste Amin’ny Taona 2017″, Maminany Ny Ambasadaoro Indoneziana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Jona 2016 8:56 GMT
Fiarahamonina ara-toekarena ASEAN. Sary: Parlemantera ASEAN misahana ny zon'olombelona. Azon'ny rehetra ampiasaina.
Tamin'ny fanambarana nataony tamin'ny mey tamin'ity taona ity, naminany ny hidiran'i Timor-Leste tanteraka ao amin'ny fikambanana amin'ny taona 2017 tao amin'ny vavahadin-tserasera AntaraNews, vaovaon'i Indonezia, ny ambasadaoron'i Indonezia ao amin'ny Fikambanan'ny Firenena Azia Atsimo (ASEAN), Atoa Rahmat Pramono.
Nametaka ny fangatahana hiditra ao amin'ny ASEAN i Timor-Leste tamin'ny taona 2011, tamin'ny fotoana i Indonezia no filohan'ny fikambanana araka ny fifandimbiasan-toerana miodina ao aminy. Niantoka ny filoha Susilo Bambang Yudhoyono fa manaiky amin'ny fomba ofisialy ny fidiran'i Timor-Leste ny firenena rehetra mpikambana, noho ny fananganana fomba fiasa roa lehibe, Ny filankevitra fandrindrana sy ny sehatra teknika sy ny Filankevitry ny asa ao amin'ny ASEAN hanombana ny fizotran'ny fikarakaran'ny firenena ireo andry lehibe telon'ny fikambanana: ny politika sy ny filaminana, ny toekarena ary ny andry sosialy sy kolontsaina.
Ireo zava-kendrena sy tanjon'ny ASEAN dia mifantoka amin'ny fampivelarana ara-toekarena, sosialy, kolontsaina, teknika, fanabeazana sy ny sisa, sy ho amin'ny fampiroboroboana ny fandriampahalemana sy ny fahamarinan-toerana amin'ny fanajana ny rariny sy ny fanandratana voalohany ny zo ao amin'ny fanajana ny fotokevitry ny Firenena Mikambana.
Nanao fanambarana tamin'ny alalan'ny teny filazana ny minisitry ny raharaham-bahiny Timorey , Roberto Sarmento de Oliveira Soares, fa:
Efa ao anatin'ny fanombanana avokoa ny andry telo, […] ka dia miandry izay avy any amin'ny ASEAN isika izao […] ahafahana manao ny fanapahan-kevitra farany amin'ny fampidirana antsika [ho ao amin'ny fikambanana].
Nilaza i Rahmat Pramono referiu fa efa vita tombana ny roa amin'ireo andry ireo, ny resaka sosialy sy kolontsaina sisa:
Efa vita tombana ny eo amin'ny fanadihadiana ara-pilaminana sy toekarena, raha antenaina ho vita tanteraka mialoha ny faran'ity taona ity ny fanombanana ara-kolontsaina sy ara-piaraha-monina.
Mila mametraka ny fanadihadiana sentetika ny politika sy ny lasitra araka ny lalàna misy ao Timor-Leste ao amin'ny Filankevitry ny Minisitry ny ASEAN ny Minisiteran'ny Raharaham-bahiny sy ny Fiarahamiasan'i Timor-Leste hahazoany fankatoavana. Kendrena amin'ny fananganana “Memorandum” amin'ny rafitry ny varotra ivelany ny maha-zava-dehibe ho an'i Timor-Leste ny mamaly ny fitakian'ny ASEAN. Ny antontan-kevitra no hamaritra ny valiny ho an'i Timor hahazoany miditra ao amin'ny fikambanana.
Nanamarika ihany koa ny ambasadaoro indoneziana ao amin'ny ASEAN fa mila mampivelatra sy manatsara ny otrikarena ara-olona i Timor-Leste fa azo tanterahina izany ao aoriandriana:
Na izany aza, tsy voatery miandry ny fivelaran'ny otrikarena feno ara-olona i Timor-Leste vao mety ho mpikambana feno ao amin'ny ASEAN. Azo tanterahina izany rehefa tafiditra ao amin'ny fianakaviamben'ny ASEAN i Timor-Leste.
Ny ASEAN dia fikambanana ara-politika sy toekarena naorin'i Indonezia, Malayzia, Filipina, Singapaoro ary Thailandy tamin'ny taona 1967. Nanomboka hatreo ny «fianakaviamben'ny Firenena Azia Atsimo no nitombo isa ary ahitana firenena folo amin'izao fotoana izao, Brunei, Kambodza, Indonezia, Laos, Malayzia, Myanmar, Filipina, Singapaoro, Thailandy ary Vietnam.
Hatramin'ny niverenan'ny fahaleovantena tamin'ny taona 2002 no efa nanehoan'i Timor-Leste ny faniriany hiditra ao amin'ny Fikambanan'ny Firenena Aziatika Atsimo.
Ankehitriny ny firenena dia ao anatin'ireo fikambanana iraisampirenena toy ny Fikambanan'ny firenena miteny portiogey (CPLP).